कसरी सुर्धन्छ एसएलसि ?-Nagarikaawaj.com
कसरी सुर्धन्छ एसएलसि ?
शुक्रबार, असार ६, २०७१
बुटवल । –
२०६६ – ३५.५ प्रतिशत
२०६७ – ४४ .५ प्रतिशत
२०६८ – ५२.३५ प्रतिशत
२०६९– ५८.१३ प्रतिशत
२०७० – ५६.८ प्रतिशत
माथिको तथ्यांक एसएलसि परिक्षामा फेल अर्थात अनुत्तिर्ण हुने विद्यार्थीहरुको हो । यसवर्ष निस्कीएको परिक्षामा अघिललो वर्ष २०६९ को परिक्षाको तुलनामा केही प्रतिशत मात्रै अनुत्तिर्ण विद्यार्थीको सख्याँ घटेको जस्तो देखिएपनि तथ्यांक हेर्दा २०६६ सालदेखी त्यो सख्याँ निरन्तर उकालो लागेको छ । आखिर किन यसरी निराशाजनक छ यसएलसि रिजल्ट ?, प्याव्सन रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण खनाल भन्छन्, –‘नेपालमा लिईने एसएलसि परिक्षाको शिक्षा नितीनै खराब छ, अव एसएलसि परिक्षा सुर्धोहो भने परिक्षा निती परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ विद्यार्थीहरुले वर्षभरी मिहेनत गर्छन् । अभिभावक एकछाक नखाईकन समेत आफ्ना छोराछोरीको पढाईमा लगानी गर्छन्, र पनि, विद्यार्थीको उपलव्धी शुन्य जस्तै । फेल हुनुको पछि नेपालको परिक्षा निती मात्रै खराव हैन, शिक्षकहरुको लगनशिलतामा कमि तथा विद्यालयमा हुने राजनितीलेनी प्रभाव पारेको छ, प्याव्सन निवर्तमान अध्यक्ष खनाल भन्छन् ।
एउटा विद्यार्थीले अन्य सवै विषयमा राम्रो अकं ल्याएपनि कुनै एक विषयले मात्रै पनि माथील्लो तहमा जान रोकीराखेको हुन्छ । जुन विषयकै कारण उसको जिन्दगीको शैक्षिक यात्रामा पुर्ण विराम लागेको हुन्छ । यसैको कारण शैक्षिक यात्रा वदल्दै त्यो विद्यार्थी खाडि मुलुक पस्न वाध्य समेत हुन्छ । तर, त्यही विद्यार्थी अरु विषयमा भने निकै राम्रो अकं ल्याएको हुन सक्छ । जुन विद्यार्थीले फेल भएको विषय वाहेक अरु विषयमार्फत पनि जिन्दगी वनउन सक्छ । यसलाई ग्रेड सिस्टम भन्छ त्यही सिस्टममा लैजानुपर्छ, प्याव्सन निवर्तमान अध्यक्ष खनाल भन्छन् । उहाँका अनुसार नेपालमा निरन्तर घटेको एसएलसि परिक्षाको नतिवा वदल्न चाडैनै शिक्षा निती र प्रणाली चेन्ज गर्नुपर्छ ।
नेपालभर यसवर्ष ४३.९२ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका थिए । गत शुक्रवार सार्वजनिक भएको नतिजामा नियमिततर्फ गतवर्षभन्दा २.३५ प्रतिशत बढी पास देखिए पनि पा“च वर्षयता आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी फेल हु“दै आएको घटनामा यो वर्ष पनि सुधार देखिएन । नियमिततर्फ ३ लाख ९४ हजार ९ सय ३३ विद्यार्थीले परीÔा दिएकोमा १ लाख ७३ हजार ४ सय ३६ विद्यार्थी मात्रै उत्तिर्ण भएका थिए । यति धेरै सख्याँमा विद्यार्थी फेल हुनुमा विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय र शिक्षकलाई मात्रै घाटा छैन, स्वय्रं राज्यलाई समेत करोडौको नोक्सानी छ । यस विषयमा राज्य उदानशिल छ ।
त्यसो त, अस्ती मात्रै रिजल्ट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विभागमा महानिर्देशक लवदेव अवस्थीले ५६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएकोमा जिम्मेवारी सरकारले लिने वताएका थिए । तर कस्तो खालको जिम्मेवारी सरकारले लिनेहो भन्ने प्रष्ट रुपमा भन्न सकेका छैनन । १० कक्षामा गणित विषयमा घाताकंको हिसाव गर्ने विद्यार्थीलाई माथिल्लो तहमा त्यो काम लाग्दैन, किन पढ्ने ? यति मात्रै हैन, अन्य धेरै विषयवस्तुहरु पुस्तकमा राखिएको छ, एसएलसि परिक्षामा सोधिन्छ । तर भविष्यको वारेमा गम्भिर भएर न पुस्तक वनाईएको छ, न त त्यस्तै खालका विषयवस्तुहरु पुस्तकमा समेटिन्छ । अघिल्लो वर्ष एसएलसि परिक्षामा सामाजिक विषयमा धेरै विद्यार्थी फेल भएका थिए । जहाँ ७५ प्रतिशत भन्दा वढि पुस्तक वाहीरका प्रश्न सोधिएको थियो । विद्यार्थीहरुले दिनरात मरिमेटेर पुस्तक पढ्ने, प्राक्टिकल गर्ने तर परिक्षामा वाहीरका प्रश्न सोधिदा विद्यार्थी फेल भएका हुन भन्छन् कतिपय शिक्षकहरु ।
तर यहि विषयमा शिक्षाविद् लोकनाथ उपाध्यायको भनाई भने फरक छ । कक्षा १० सम्म विद्यार्थीले सामान्य कुराहरु सवै थाहा पाउनुपर्छ । पुरा विषयहरु पुस्तकमा समेट्न गाह्रो हुन्छ । यस्ता खालका विषयमा विद्यार्थीनै चनाखो हुनुपर्छ, टाठा विद्यार्थी पास हुने र ध्यान नदिने विद्यार्थीहरु फेल हुने कारणनै यहि हो, उपाध्यायको भनाई छ ।
एसएलसिलाई सुधार्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नेपाल सरकार आ आफ्नो क्षेत्रवाट ईमान्दारीका साथ लाग्नुपर्छ, उपाध्याय भन्नुहुन्छ । हामी भन्छौं किन सुर्धन्न, तर सुर्धिने वाटोपनि अपनाउनुपर्योनी, उहाले भन्नुभयो । शिक्षक पार्टि भन्दै हिड्ने, अभिभावक विद्यार्थी कहाँ छ, पढेको छ या छैन, के मन पराउँछ भन्ने कुरा नवुझ्ने, नेपाल सरकार निती मात्रै वनाउने कस्तो निती ठिक हुन्छ भन्ने नवुझ्ने गर्दानै एसएलसि परिक्षा निराशाजनक आएको हो, प्याव्सन नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका उपाध्या भन्छन्, –‘यि माथीको कुराहरुलाई ईमान्दारीका साथ काम गर्नेहो भने ठिक हुन्छ ।’ नेपालमा पढाई हुने विषयको तुलनामा विदेशमा पनि त्यत्ति फरक छैन, उनले भने, –‘खाली विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक तथा राज्यकै ध्यान कमि भएकोले यो समस्या दोहोरीएको हो ।’ नेपालमा निरन्तर घटेको पास विद्यार्थीको सख्याँमा दोष परिक्षा प्रणालीको मात्रै हैन, उनले भने ।
यदपी गत वर्षको तुलनामा विद्यार्थी अलिकति अध्ययनशिल भएको शिक्षाविद्हरुले तर्क राख्छन् । अहिले प्रकाशित नतिजा अनुसार सामुदायिक विद्यालयकै नतिजा वढी कमजोर देखिएको छ । पास हुनेमा सामुदायिक विद्यालयका २८.१९ र संस्थागततर्फ ९३.२५ प्रतिशत छन् । ०६६ को उत्तीण दर ६४.३१ प्रतिशत रहेकामा ०६७ मा ५५.५० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यस्तै ०६८ मा ४७.६५ र ०६९ मा ४१.८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए ।
राज्यले परिक्षा मर्यादित वनाउने नाममा विद्यार्थीले सहनै नसक्ने गरि दवाव सृजना गरेको हो की भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले परीक्षा मर्यादित गरिएकाले र निगरानी बढाएकाले वढी पास हुन नसकेको तर्क गरेका थिए । उत्तिर्ण प्रतिशत ह्वात्तै नवढेपनि गुणस्तर भने वढेको छ भन्छन् उनि । के विद्यार्थीहरु वढि फेल भएमा परिक्षा मर्यादित भएको हुन्छ त ?, शिक्षा सचिव पण्डितलाई अभिभावक, शिक्षकहरुको प्रश्न छ ।
झण्डै ५ वर्षजति भयो । एसएलसि परिक्षा निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसले करोडौ राज्यको नोक्सानी भैरहेको छ ।